Ɔkwan a Ɛkɔ Daa Nkwa Mu—Nnianim
KENKAN WƆ Abbey Acholi Afrikaans Amharic Ateso Attié Aukan Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bissau Guinean Creole Boulou Bété Chichewa Chitonga Cibemba Damara Douala Edo English French Ga Haitian Creole Igbo Indonesian Italian Jula Kiluba Kinyarwanda Kisonge Kwanyama Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Luo Medumba Ngangela Nyungwe Nzema Oromo Portuguese Rutoro Shona Sidama Spanish Swahili Tigrinya Tiv Twi Urhobo Venda Wolaita Xhosa Yoruba
ADE NYINAA SO TUMFOƆ NYANKOPƆN ne amansan nyinaa Wura. Yɛn nkwa a yɛwɔ nnɛ ne nea yebenya daakye gyina no so. Otumi ma akatua de asotwe ma. Ɔwɔ owu ne nkwa so tumi. Sɛ yenya n’anim dom a yebedi yiye; sɛ yɛannya n’anim dom a ɛrensi yɛn yiye. Hwɛ sɛnea ɛho hia sɛ yɛma yɛn som sɔ n’ani!
Nnipa nam akwan pii so na ɛsom. Sɛ ɔsom te sɛ ɔkwan a, so nyamesom akwan nyinaa sɔ Nyankopɔn ani? Dabi, ɛnsɔ n’ani. Onyankopɔn diyifo, Yesu kyerɛe sɛ akwan abien pɛ na ɛwɔ hɔ. Ɔkae sɛ: “Momfa ɔpon teateaa no mu; efisɛ ɔkwan a ɛsõ na ɛtrɛw no kɔ ɔsɛe mu, na nnipa bebree na wɔnam so rekɔ mu; nanso ɔpon teateaa ne ɔkwan hihiaa no ne nea ɛkɔ nkwa mu, na nnipa kakraa bi na wohu.”​—Mateo 7:13, 14.
Ɔsom ahorow abien pɛ na ɛwɔ hɔ: nea ɛkɔ nkwa mu ne nea ɛkɔ ɔsɛe mu. Nhomawa yi atirimpɔw ne sɛ ɛbɛboa wo ma woahu ɔkwan a ɛkɔ daa nkwa mu no.